Dhimasho iyo dhaawac ka dhashay Guri shacab kusoo dumay | KEYDMEDIA ONLINE
Dhimasho iyo dhaawac ka dhashay Guri shacab kusoo dumay
Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay kaddib markii uu soo dumay guri ku yaal degmada Shingaani ee gobolka Benaadir.
MUQDISHO, Soomaaliya - Laba ruux ayaa geeriyootay, Sagaal kalena waxaa kasoo gaaray dhaawac, kaddib markii uu kusoo dumay gurigooda oo ku yaalla degmada Shangaani ee gobolka Banaadir.
Waaxda gurmadka deg-degga ah ee Dowladda Hoose ee Xamar, ayaa gurmad u sameeyeen Qoysaska danyarta ah oo ku noolaa dhismaha Waaxda 1-aad ee Howd Degmada Shangaani Gobolka Banaadir.
Gudoomiye ku xigeenka Arrimaha Bulshada iyo Wacyi-galinta Maamulka Gobolka Banaadir Basma Caamir Shakeeti, ayaa meesha ay wax ka dhaceen gaartay, waxayna u mahadcelisay dhammaan dadkii ka qeyb qaatay bad baadinta qoysaskii maanta ay soo gaartay dhibaatada.
Dhaawaca 9 -ka qof ayaa loola cararay Isbitaalada Muqdisho, iyadoo dadka dhintayna la aasi doono, waxaana inta badan degmooyinka Shangaani iyo Xamarweyne ku badan qoysas dan yar ah oo daggan guryo qadiimi ah oo qaarkood dhisan qiyaastii 100 sano iyo ka badan.